हास्य कलाकार मनोज गजुरेल कोरोना पोजिटिव भए पछि डाक्टर रबिन्द्र समिर को गाइडलाइन पालना गर्दै ! – Complete Nepali News Portal
हास्य कलाकार मनोज गजुरेल कोरोना पोजिटिव भए पछि डाक्टर रबिन्द्र समिर को गाइडलाइन पालना गर्दै !
हास्य कलाकार मनोज गजुरेल ले आफ्नो फेसबुक वाल मा स्टाटस राखी आफु पनि कोरोना पोजिटिव भएको जानकारी गराउनु भएको छ !
भर्खरै प्राप्त रिपोर्ट अनुसार, मेरो शरीरमा कोभिड १९ ‘पोजेटिभ’ देखिएको छ । अघिल्लो हप्ता दाजुलाई अस्पताल लाने/ल्याउने गरेको थिएँ । गत बिहिबार सामान्य टाउको दुख्यो । शुक्रबार ९८° को ज्वरो देखियो । शनिबार ढाडको दुखाई महसुस गरेँ । त्यसपछि हिजो पिसिआर टेस्ट भयो । भर्खरमात्र कोभिड पोजेटिभ भनेर रिपोर्ट आएको हो ।